Nhoroondo yekambani - Shandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co., Ltd.
Shandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co., Ltd.
Shandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co, Ltd. (SICER) inyanzvi yepamusorosoro bhizinesi rakarongedzwa kubva kuShandong Institute of Ceramics Research & Dhizaini, yakavambwa muna 1958, uye yakagadziridzwa kuve chikuru R&D, dhizaini uye chigadziko chekugadzira chepamusoro-tech Ceramics, epamberi ezuva nezuva-anoshandiswa maceramics uye zvedongo mbishi zvigadzirwa, izvo zvine zvakakosha pesvedzero mukuvandudzika kwezvisingaite zvisiri zvesimbi zvinhu kumba nekunze.
SICER rave rinokosha bhiridha rekodzero dzepfuma, uye zvigadzirwa zvaro zvakashandiswa zvakanyanya mukugadzira mapepa, simbi, petrochemical, simba remagetsi nemamwe maindasitiri.
Muna 2017, SICER yakavaka epamberi zvedongo maindasitiri paki, yakashongedzerwa nehupfu granulator, yakanyanyisa isostatic yekudhinda, otomatiki vira, CNC yekugadzirisa nzvimbo uye nhevedzano yezvigadzirwa zvehunyanzvi. Mitsara yekugadzira yezvikamu zvekupfeka yakagadziridzwa zvizere. Zvichienderana neShandong Industrial Design Center, SICER yakatora chinzvimbo chakabatana muzvirongwa zvekutsvagisa pamwe nekudzidza kwakadzama kwenzira yekudzikisa mvura; nekushandisa kutsvagurudza kunetsekana, SICER yakaiswa pakuongorora kwepfuma alumina, oxide yakabata alumina, zirconia, silicon carbide, silicon nitride uye zvimwe zvinhu kusangana nezvinodiwa nevatengi zvakaoma.
Poda yekugadzirisa michina
Zvishongedzo zvezvikamu zvakakosha zvakaumbwa
CNC Kukuya Muchina
Nezve pamusoro pe80% zvigadzirwa zvehunyanzvi zviri kumanikidzwa, SICER rave rinokosha birthland rekwidzi kodzero dzezvivakwa, uye zvigadzirwa zvaro zvave zvichishandiswa zvakanyanya mupulp & bepa, simbi, petrochemical, simba remagetsi nemamwe maindasitiri.
Kune iwo indasitiri inogadzira mapepa, SICER's inopfeka-inoshingairira zvedongo zvigadzirwa zvakave zvakagadzirirwa akashongedzerwa kumazana emitsara yekugadzira yeiyo-inomhanyisa mapepa muchina, iine trim upamhi kupfuura 6.6 metres uye kushanda nekukasira kusvika ku1300 m / min. Zvichienderana nepamusha wepamusoro-magumo musika, SICER yakasimbisawo kubatana neVOITH, VALMET, KADANT uye mamwe emabhizinesi anozivikanwa epasi rese, ichiva rimwe bhizinesi rakabudirira rinotungamira kukura kweChina zvigadzirwa zvekugadzira mapepa.
Uye zvakare, iyo ceramic koni yakagadzirwa neSICER yakaumbwa inopfuura makumi matatu ematanho ane anopfuura mazana maviri zvigadzirwa. Iine mhando yepamusoro yekurwisa, abrasion uye ngura, izvi zvigadzirwa zvinotengesa mushe pasirese.
Ichitevera yenyika yekuvandudza maindasitiri uye kugona kugadzirisa pfungwa, SICER yakavaka yepamusoro ceramic maindasitiri paki, yakashongedzerwa neupfu granulator, yakanyanyisa isostatic Press, otomatiki vira, CNC yekugadzirisa nzvimbo uye nhevedzano yezvigadzirwa zvepamusoro Mitsara yekugadzira yezvikamu zvekupfeka yakagadziridzwa zvizere. Zvichienderana neShandong Industrial Design Center, SICER yakatora chinzvimbo chakabatana muzvirongwa zvekutsvagisa pamwe nekudzidza kwakadzama kwenzira yekudzikisa mvura; nekushandisa kutsvagurudza kunetsekana, SICER yakaiswa pakuongorora kwepfuma alumina, oxide yakabata alumina, zirconia, silicon carbide, silicon nitride uye zvimwe zvinhu kusangana nezvinodiwa nevatengi zvakaoma.
Kuti akurumidze localization muitiro mukuru-magumo bepa equipments of China, SICER achaedza kuva pose kunoshamisa yepamusorosoro zvedongo zvebhizimisi.